The Great Porn Experiment - TEDx (မတ်လ၊ ၂၀၁၂) မှာပေးထားတဲ့သင့် ဦး နှောက်
The Great Porn Experiment - TEDx ၌ပေးသော (မတ်လ၊ ၂၀၁၂)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ဒီနေ့ရဲ့အင်တာနက်ကိုသှေးဆောငျ၏ hyperstimulation ကိုင်တွယ်ရန်ပြောင်းလဲရှိပါသလား? ဂယ်ရီ Wilson ကအချို့သောမိုးသည်းထန်စွာအင်တာနက်အသုံးပြုသူအဲဒီရောဂါလက္ခဏာတွေ၏အံ့သြစရာမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်, ဤဖြစ်ရပ်နောက်ကွယ်ကသိပ္ပံတက်ဖေါ်ပြခြင်းအတွက်နှောင့်ယှက်လက္ခဏာတွေဆွေးနွေးထားပါတယ်။
“ Great Porn Experiment” အတွက်လက်တွေ့အထောက်အပံ့ (၂၀၁၂)
အောက်ပါတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် တိုတောင်းသောအကျဉ်းချုပ် ဖန်ဆင်းတောင်းဆိုမှုများထောက်ပံ့ပင်ကိုယ်မူလနှင့်လက်တွေ့အထောက်အထား မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု
၏ဤစာရင်းကိုကြည့်ရှုပါ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / လိင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 35 လေ့လာမှုများကျော်။ အဆိုပါ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး7လေ့လာမှုများ causation အကြံပြု, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
အထက်ပါလေ့လာမှုများအပြင်, ဒီစာမျက်နှာ 140 ကျွမ်းကျင်သူများက (urology ပါမောက္ခ, ဆီးရောဂါပါရဂူ, စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်, စိတ်ပညာရှင်, sexologists, MDS) ကျော်အားဖြင့်ဆောင်းပါးများ, ဗွီဒီယိုများနှင့် podcasts တွေကိုပါရှိသည် သူကိုအသိအမှတျပွုနှင့်အောင်မြင်စွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED နှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်အရှုံးကုသပါပြီ။
မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုဆယ်ခုစာရင်းတွင်“ ဦး နှောက်လေ့လာမှု” သည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု (နှင့်ဂိမ်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကဲ့သို့အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုပုံစံများ) တည်ရှိပြီးအခြားစွဲလမ်းမှုများနှင့်တူညီသောအခြေခံယန္တရားများနှင့် ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများပါ ၀ င်ကြောင်းကျွန်ုပ်၏ထောက်ခံမှုကိုထောက်ခံခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုနယ်ပယ်အဆအဆကြီးထွားလာသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု ၃၅၀ ခန့်ရှိပြီး“ ဦး နှောက်လေ့လာမှု” ဖြစ်သည်။ သူတို့အားလုံးသည်အာရုံကြောဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များနှင့်အင်တာနက်စွဲသူများ၏ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုကိုစွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်ကိုက်ညီသည် အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု“ ဦး နှောက်လေ့လာမှု”)။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တော်တော်များများအင်တာနက်စွဲလမ်းလေ့လာမှုများ၏ဒီဇိုင်းကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကြောင်းပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံပါသည် ဖြစ်စေတဲ့ ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုစိတ်ကျရောဂါ, ADHD, စိုးရိမ်စိတ်, အဖြစ် (အချို့အတွက်) ရောဂါလက္ခဏာတွေထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများများ၏စာရင်းကို: အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုကိုသရုပ်ပြသည့်လေ့လာမှုများ ဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများ.
မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု (1) အသိ, (2) Desensitization, နှင့် (3) အလုပ်မဖြစ် prefrontal ဆားကစ် (hypofrontality): သုံးအဓိကညစ်ညမ်းစွဲနှင့်အတူပေါ်ပေါက်သောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ မတ်လ, 2012 ကတည်းကညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်အများကြီးအာရုံကြောသုတေသနထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများအားလုံးသုံးကြားတွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ မကြာခဏ porn အသုံးပြုသူများနှင့်လိင်စွဲအပေါ် 41 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ:
သတင်းပို့လေ့လာရေး ာင်း porn အသုံးပြုသူများ / လိင်စွဲသူများအတွက် (cue-reactivity & cravings) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
သတင်းပို့လေ့လာရေး desensitization porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲဒါမှမဟုတ်လေ့ (သည်းခံစိတ်အတွက်ရရှိလာတဲ့): 1, 2, 3, 4, 5, 6.
functioning ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင်သတင်းပို့လေ့လာရေး (hypofrontalityporn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲအတွက်) သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲ prefrontal လှုပ်ရှားမှု: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
အဆိုပါ 44 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ အဆိုပါလုပ်ပေးအဖြစ် (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း), အစွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး 25 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ငါ၏အ TEDx ဟောပြောချက်တွင်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းအကြောင်းကိုဖော်ပြပြီး (စွဲလမ်းမှုကိုညွှန်ပြနိုင်သော) ယခုလေ့လာမှုငါးခုသည်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများအားအမျိုးအစားအသစ်များသို့သို့မဟုတ်သည်းခံနိုင်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးမေးမြန်းခဲ့သည်။1, 2, 3, 4, 5) သွယ်ဝိုက်နည်းအမျိုးမျိုး (သို့) လက်တွေ့အကောင့်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်း။ တစ်ဦးအပိုဆောင်း 40 လေ့လာမှုများ တွေ့ရှိချက်များကို“ ပုံမှန်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်” သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းများပိုမိုကိုက်ညီမှုရှိခြင်းနှင့်အစွန်းရောက်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောအမျိုးအစားများသို့တိုးပွားလာခြင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
ဆုတ်ခွာခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ လေ့လာခဲ့သောလေ့လာမှုတိုင်းသည်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ လောလောဆယ် လေ့လာမှု ၁၀ ​​ခုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုသူများအားရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုဖော်ပြခဲ့သည်.
အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းစွဲ debunk ကြောင့်အာရုံကြောလေ့လာမှုများကော? အဲဒီမှာ အဘယ်သူမျှမဖြစ်ကြ။ ၏ဦးဆောင်ရေးသားသူနေစဉ် Prause et al ။ , 2015 သူမ၏တည်းသော EEG လေ့လာမှုညစ်ညမ်းစွဲလိမ်ပြောဆိုထားသည်,9peer-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများသဘောမတူ: ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015။ ဤအ9စာတမ်းများပြည်နယ်ပေါ်တွင်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ကြောင်း Prause et al။ အမှန်တကယ်တွေ့ရှိခဲ့ desensitization / လေ့ (စွဲလမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်း), အဖြစ် နည်းသော vanilla porn (ဓာတျပုံ) မှဦးနှောက်ကို Activation မှဆက်စပ်ခဲ့သည် သာ. ကြီး porn အသုံးပြုခြင်း။ မယုံကြည်သောသူတို့ကား, Prause et al။ အသင်းရဲရငျ့စှာဒီကနေယူတစ်ခုတည်းအပိုဒ်နှင့်အတူညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ်မှားယွင်းစေရန်လုပ်ဆောင်ခြင်းရှိသည်ဟုအခိုင်အမာ 2016 "အယ်ဒီတာမှစာ။ " ဒီကျယ်ပြန့်ဝေဖန်မှုကိုဖျောပွအဖြစ်အဖြစ်မှန်အတွက် Prause အက္ခရာ, ဘာမျှမလိမ်: အယ်ဒီတာ "Prause et al မှပေးစာ။ (2015) စွဲဟောကိန်းများ၏နောက်ဆုံးပေါ်မမှန်မကန်ပြုလုပ်မှု " (2016).
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ညာယား၏နိုင်ငံရေး infighting သတ်မှတ်ထားရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်းပုံပေါ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အများဆုံးအသုံးများဆေးပညာဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေလက်စွဲ, ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), ပါဝင်ပါသည် သစ်တစ်ခုရောဂါ porn စွဲများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "ဒီ ICD-11 လည်း video-game ထဲကစွဲလမ်းအသစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည်: အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ.
မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု "ဖော်ပြထားအဆိုပါအခြား Porn စမ်းသပ်မှုညစ်ညမ်းမှုကိုဖယ်ရှားပေးသောလူငယ်များသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုခွင့်လွှတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ TGPE သည်“ နှိုးဆွမှု” (အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၊ ယင်း၏မျိုးကွဲ) ပိုမိုဆိုးဝါးသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောဦးနှောက်မြူ, အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာ, ယေဘုယျစိုးရိမ်သောက, စိတ်ကျရောဂါနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဖြစ်ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေ။ 2018 ၏အဖြစ်ရှိမတည်ရှိ ဆက်စပ်လေ့လာမှုများရာပေါင်းများစွာ နှင့် 80 causation လေ့လာမှုများ ဒီအခိုင်အမာထောက်ပံ့။
ပထမဦးစွာယခုရှိပါတယ် 75 ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ-စိတ်ခံစားမှုကျန်းမာရေးကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလင့်ထားသောလေ့လာမှုများနှင့်ဆင်းရဲတဲ့သိမြင်မှုရလဒ်များကျော်.
“ Great Porn Experiment” အတွက်လက်တွေ့အထောက်အပံ့ - TEDx Glasgow (2012): Page 1
“ Great Porn Experiment” အတွက်လက်တွေ့အထောက်အပံ့ - TEDx Glasgow (2012): Page 2